एक यदि दोषी नही उत्सव बच्चा, एक जन्मदिन लागि कोठा, एक किशोरी वा वयस्क कसरी सजाउनु गर्न?
सबैभन्दा मनपर्ने बिदा को एक जन्मदिन छ। उहाँले हामीलाई सबै हाम्रो जीवन सँगसँगै, प्रत्येक वर्ष हामीलाई मात्र होइन वर्ष थप्दा, तर पनि संचित अनुभव, नयाँ मित्र र परिवारका सदस्यहरूले, नयाँ उपलब्धिहरू र आनन्द। यो दिन सधैं हल्ला र रमाइलो छ, अरू केहि भन्दा बढी हामीलाई धेरै प्रिय छ अतिथि र उपहार, ध्यान, मुस्कान र फूल, कोमल, दयालु शब्द र निष्कपट कुराकानी धेरै। जन्मदिन आउँदै हरेक समय, भ्रमण गर्न घर सजाउनु गर्ने इच्छा छ र तपाईं एउटा विशेष, औपचारिक शानदार र उज्ज्वल सजावट घेरिएको यो दिन महसुस हुनेछ।
जो हामी अब पूर्ण व्यापक जवाफ दिन एउटा प्रश्न - मेरो जन्मदिन को लागि एक कोठा कसरी सजाउनु गर्न। यो रोचक मदत गर्न र tastefully सबैभन्दा मनपर्ने छुट्टी आफ्नो घर सजाउनु निश्चित छ। जसको जन्मदिन यो तपाईं कोठा अप कसरी आकर्षित गर्न जो चाँडै स्वागत अतिथि को धेरै पूरा हुनेछ निर्भर हुनेछ उल्लेख थियो आधारमा।
मा दिन कोठा को सजावट एक बच्चाको जन्म - आवश्यक धेरै हुनुपर्छ जो उज्ज्वल, रंगीन बेलुन छ। तिनीहरूले अंधाधुंध तल्ला र फर्नीचर छरिएका गर्न सकिन्छ, धेरै टुक्रा वा एक कोठा को परिधि मा प्रत्येक अन्य देखि नै दूरी मा पर्खाल संलग्न मा हुन सक्छ। त्यहाँ हेलियम बेलुन हो भने, तिनीहरूले एक निश्चित प्रतीकात्मक तथ्याङ्कले को रूप मा छत गर्न फ्लोट हुनेछ। कोठा गर्न प्रवेश मा कट्टर र बेलुन को Windows मा फ्रेम धेरै साना जन्मदिन केटा प्रसन्न छ। को बलमा बाहेक, तपाईं दिनको लागि नायक को छवि संग रंगीन पोस्टर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, त्यहाँ उपयुक्त हुनेछ र संलग्न कलमले एक पोस्टर एक विशेष बधाई र शुभकामना लेख्न। यो एक बच्चाको जन्मदिन पार्टी छ भने, पाहुनाहरूको खिलौने गर्न कोठा ल्याउन र चिरपरिचित रूसी र विदेशी कार्टून देखि मजा र संगीत वा कराओके गीतहरू विभिन्न समावेश गर्न पक्का हुन वा रोचक, हास्यास्पद कार्टून हेर्दै एउटा सानो आगंतुकों छ। तिनीहरूले भोजन पछि, र जन्मदिन केटा एक जन्मदिन केक, जो पनि सामान्य रूप हुन सक्छ तर आफ्नो मनपर्ने multgeroya, फूल वा कार को रूप मा, खेल मा जान्छ मा मोमबत्ती झटका हुनेछ।
अब तपाईं उहाँले सन्तुष्ट थियो त्यसैले मात्र कसरी, मा बच्चा को जन्म दिन एक कोठा सजाउनु थाहा छ, तर आफ्नो मित्रहरू उत्सव बोलाइयो।
जन्मदिन सुट लागि के सजावट को जन्मदिन केटा एक किशोरी केटा वा केटी छ भने? carousing जहाँ यहाँ कल्पना छ। सायद घर मा सबै भन्दा ठूलो कोठा द्वारा, समय यसलाई अतिरिक्त फर्नीचर को, खाली गर्न चरणबद्ध त्यसैले, नृत्य लागि एक विशाल क्षेत्र छ। कोठा एक मौन प्रकाश छ जो एक निश्चित डिस्को हल को, दयालु असामान्य प्रकाश आवश्यक हुनेछ दिन। तपाईंको किशोर बच्चाहरु उज्यालो-संगीत सिर्जना गर्न हार्डवेयर केही छ भने, वा साथीहरूसँग जस्तै केहि लाग्न सक्छ, यो चमकता रोशनी, चमकीले रंग Garland, रोशनी वा घुमिरहेको दर्पण बल धेरै उपयोगी हुनेछ। अतिरिक्त यो कोठा मा केहि हुन हुँदैन। तिनीहरूले बस्न, कुराकानी र प्रस्ताव मिठाई र जलपान गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ कोठा, को कुना मा एक सानो तालिका साथीहरूको संगठित। लागि उपहार एक विशेष ठाउँ विनियोजन गर्न। उदाहरणका लागि, यो विपरीत पर्खाल मा स्थित एक विशेष अल्मारी हुन सक्छ। उनको जन्मदिन मा बाहिर राख्नु उहाँले मित्र र परिवारका दिनेछु सबै कि राम्रो हुनेछ। उज्ज्वल वेशभूषा, को हँसिलो संगीत र रोचक कुराकानी अन्तर्गत नाच्छन् - यो कम्पनीको किशोरीहरूको गर्न अपील गर्नेछ भन्ने कुरा छ।
मा एक वयस्क जन्मदिन को दिन एक कोठा कसरी सजाउनु गर्न? यो अर्को विकल्प हुनुपर्छ। तपाईं यो शुभ दिन मना छ भने, घर, पोस्टर मा छुट्टी अभिवादन, फूल को bouquets, तालिका मा शैम्पेन को एक बोतल र एक शान्त सहज बसाइ पर्याप्त हुनेछ। बेलुन संग कोठा सजाने कि नगर्ने, म व्यक्तिगत आफ्नो रुचि हुनेछ। यसलाई जसले तपाईंलाई नजिक प्रेम र राम्रो मित्र ती को सर्कलमा एक आरामदायक वातावरणमा दृश्य छैन सजावट र शान्त, सहज बसाइ महत्त्वपूर्ण छ। एक रोचक कुराकानी कायम गीतहरू पिउने गाउन, सायद नृत्य गर्न, प्ले बोर्ड खेल - बिंगो, कार्ड, एकाधिकार - तपाईं आफ्नो जन्मदिन परिपक्व मानिस मनाउन एक सुखद अवसर लागि आवश्यक छ कि धेरै कुरा छ। यस्तै अवस्था गृह बाहिर सिर्जना गर्न सकिन्छ - एक क्याफे वा रेस्टुरेन्ट मा। जहाँ शब्दहरू "जन्मदिनको शुभकामना," "धन्य वार्षिकोत्सव!" बधाई छ! "," हामी तपाईंलाई प्रेम! "अनि अरूसित उपयुक्त ब्यानरहरू।
अब तिमी मेरो जन्मदिन को लागि एक कोठा कसरी सजाउनु थाहा छ। कुनै पनि मामला मा, अब तपाईंले सर्वोत्तम तरिका मा प्राप्त।
यहूदी विवाह परंपराओं
परी कथा "ख्रीष्टको कांस्य बेल 'गिरजाघर मुक्तिदाता क्रिसमस मा बच्चाहरु दिनुभयो
सबै भन्दा राम्रो जन्मदिन केटी 11 वर्ष प्रस्तुत। आफ्नै हातले 11 वर्ष को लागि एक जन्मदिन पार्टी मा उपहार केटी
जन्मदिन अभिवादन परिवार वा परिचितहरू
Antihypertensives 'Perineva'। प्रयोगको लागि निर्देशन
के तपाईं6महिनामा एक बच्चा दिन सक्छ?6महिनामा मेनु बच्चा
Castration र जनावरहरूको बंध्यकरण
महिला मा सिफलिस
नोवोसिबिर्स्क व्यवस्था संस्थान (शाखा) त्सू को
इटालियन चित्रकार Antonello दा मेस्सिना: जीवनी, रचनात्मकता र रोचक तथ्य
कसरी फोन बिना "सम्पर्क" सिर्जना गर्ने विवरण
औषधि "Doxycycline" मुखासे
क्रोमियम picolinate - चोट र प्रयोग बीच।
कसरी रोलर स्केट गर्न - प्रशिक्षण